Krakow hampiantrano ny hetsika Kongresy Iraisam-pirenena sy ny Fikambanan'ny Convention Convention 2022
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Poloney » Krakow hampiantrano ny hetsika Kongresy Iraisam-pirenena sy ny Fikambanan'ny Convention Convention 2022
Associations News • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • People • Vaovao Mafana Poloney • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny Kaongresy ICCA 2022 dia hifanindry amin'ny tsingerintaona faha-10 naha-mpikambana an'i Kraków tao amin'ny International Congress and Convention Association (ICCA).
Kaongresy ICCA faha-61 amin'ny 13-16 Novambra 2022, dia hitondra ny mpikambana ao aminy any amin'ny tanàna iray any afovoan'i Eropa izay ivon-kolontsaina sy zavakanto ary siansa iraisam-pirenena koa.
Kraków, Polonina dia toerana hijerena ny tantara an-jatony maro miaraka amin'ireo firavaka haingo maoderina.
Kraków dia maneho mazava tsara ny fanolorantenany ny soatoavina fototra roa an'ny ICCA: ny fiaraha-miasa ary ny fandraisana ny zava-baovao.
Ny 61er Fikambanan'ny Kongresy sy ny fivoriambe iraisam-pirenena (ICCA) Ny kaongresy amin'ny 13-16 novambra 2022, dia hitondra ny mpikambana ao aminy any amin'ny tanàna iray any afovoan'i Eropa izay ivon'ny kolontsaina, zavakanto ary siansa iraisam-pirenena koa. Kraków, Polonina dia toerana hijerena ny tantara an-jatony maro miaraka amin'ireo firavaka haingo maoderina. Isan-taona ny tanàna mora azo dia mandray hetsika ara-kolontsaina sy akademika manan-danja, ary koa ny fivorian'ny orinasa.
The 2022 ICCA Ny kongresy koa dia hifanindry amin'ny faha-10 taonan'ny Cracowmaha-mpikambana ao amin'ny International Congress and Convention Association (ICCA). Ny fiaraha-miasa dia fanalahidin'ny fitomboana sy ny fahombiazan'ny Kraków tao anatin'izay folo taona lasa izay.
Ohatra, ny KRAKÓW NETWORK dia manangona olona efa ho 400, misolo tena ireo orinasa 200 ary ahitana vondrona fanabeazana 5. Mandritra izany fotoana izany, Kraków Future Lab dia asaina mitondra ny fivoriana hanakaiky ireo teknolojia hetsika vaovao. Ny tambajotram-piaraha-miasa matanjaka dia natsangana tsy teo an-toerana ihany fa hatrany amin'ny firenena, ao anatin'izany ny Birao Fifanarahana Poloney an'ny Fikambanana fizahan-tany any Polonina, biraon'ny kaongresy isam-paritra 16, fikambanan'ny indostria nasionaly, fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny toerana ary fandraisana anjara amin'ny programa ambasadaoro an'ny kongresy. Kraków dia mpikambana ao amin'ny Marketing Cities Eoropeana ihany koa.
"Cracow mampiseho mazava tsara ny fanolorantenany ny soatoavina fototra roa an'ny ICCA: ny fiaraha-miasa sy ny fandraisana ny zava-baovao. Noho io antony io, safidy mazava ho azy ny tanàna amin'ny kaongresy amin'ny taona ho avy. 2022 Ireo solontena ao amin'ny Kongresin'ny ICCA dia afaka miandrandra mialoha ny hanana traikefa tsy misy valaka amin'ny fivoriana izay mifangaro toerana manerantany miaraka amina fikambanan-hetsika faran'izay maika, "hoy ny CEO JCCA Senthil Gopinath.
ICCA Hihaona amin'ny Ivon-toeran'ny Kongresy ICE Kraków, ny sahan'orinasa sy kolontsaina ao an-tanàna. Miorina tsara eo afovoany, nampiantrano hetsika maro eran'izao tontolo izao sy maro karazana toa ny fivoriana faha-41 an'ny Kaongresy manerantany faha-15 an'ny UNESCO an'ny OWHC sy ny fihaonambem-pirenena misokatra isan-taona momba ny Open Eyes.
“Ny kongresin'ny ICCA dia iray amin'ireo hetsika manandanja indrindra amin'ny sehatry ny fihaonana eto amin'izao tontolo izao. Isan-taona dia manangona manam-pahaizana manokana efa ho an'arivony maro indrindra amin'ny fikarakarana fihaonambe iraisam-pirenena sy kongresy: toeran-kaleha, toerana, PCO ary fikambanana. Handray azy voalohany i Polonina, izay etsy an-danin'izany manaporofo ny toerana efa matotra eo amin'ny sehatry ny indostria misy antsika, ary etsy an-danin'izany dia miteraka fotoana lehibe hampivoarana azy ”, hoy ny fanamafisan'ny Ben'ny tanànan'i Kraków Jacek Majchrowski.
“Raha mbola mitombo ny tahan'ny vaksiny ary manomboka misokatra miadana tsikelikely izao tontolo izao dia faly izahay mahita ny fiverenan'ny tranga mivantana. Krakow dia manolotra teboka fihaonana izay azon'ny mpikamban'ny ICCA marobe ary tsy isalasalana fa haneho ny tsara indrindra omen'ny indostria antsika ny fivorian'ny fikambanana iraisam-pirenena, hoy i Gopinath.
Oktobra 20, 2021 ao amin'ny 13: 27